:Sirta ku hor gudabn Shirka Maamul sameynta G/dhexe oo la ogaaday – IFTIINI SOMALIA
Posted on March 25, 2015 March 25, 2015 by BASHIR HASHI YUSSUF	Posted in somali weyn
:Sirta ku hor gudabn Shirka Maamul sameynta G/dhexe oo la ogaaday 《Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wali wadahadalo aan wax natiijo ah kasoo bixin waxa uu Magaalada Dhuuso Mareeb ee Xarunta Gobolka Galgaduud kula leeyahay waxgaradka beelaha ku shirsan Magaalada Dhuusa Mareeb.
Wararka aan ka heleyno Dhuuso Mareeb ayaa sheegaya in wali wax natiijo ah aysan kasoo bixin Wadahadalada uu Madaxweynaha magaaladaasi kula leeyahay Waxgaradka matalaya Qabaa’ilada shirka uga socday Magaalada Dhuuso Mareeb.
Ilo lagu kalsoonaan karo oo ku sugan Dhuuso Mareeb ayaa noo sheegay in wali ay taagan tahay kala qeybsanaan la xariirta halka lagu qabanaayo shirka Maamul u sameynta Gobolada Dhaxe, waxaana inta badan waxgaradka ku sugan Dhuuso Mareeb ku adkeesanayaan in shirka lagu qabto Magaaladaasi.
Waxaa sidoo kale jira Waxgarad iyo Siyaasiyiin iyana taageersan hadal kasoo baxay Madaxweynaha Soomaaliya oo ku aadan in shirka lagu qabto Magaalada Cadaado caasimada Maamulka Gobolada Dhaxana laga dhigo Magaalada Dhuuso Mareeb.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa wali kulamo la leh waxgaradka ku sugan Magaalada Dhuuso Mareeb kuwaa uu ka dhaadhicinayo in ay aqbalaan in Shirka lagu dhisayo Maamulka loo sameenayo Gobolada dhaxe lagu qabto Magaalada Dhuuso Mareeb .
Waxii Warar ah ee amuurtan kusoo kordha ( XIGASHO) BASHIR HASHI YUSUF